Ihe omimi: Ntughari Nsuso HTML - Atụmatụ kacha elu
Akwukwo Weebụ na-emekarị n'usoro ma ọ bụ HTML. A na-ahazi ibe ọ bụla n'ụzọ pụrụ iche dabere na ụdị ọdịnaya dị na ya. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ iwepụ ihe ọmụma weebụ, ọ bụ ọchịchọ onye ọ bụla iji nweta data na usoro a hazie na nke a hazie. Nke a ga - enyere aka ịchekwa oge achọrọ iji nyochaa, nyocha na ịhazi ihe ederede tupu ịkekọrịta ya. Otú ọ dị, ịnweta usoro a haziri ahazi adịghị mfe ebe ọ bụ na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ adịghị enye nke a iji gbochie ndị mmadụ iwepụ data buru ibu. Ụfọdụ saịtị, Otú ọ dị, na-enye API ndị na-enye ndị nwere nhọrọ nchịkọta ozi n'ụzọ dị mfe ma dị mfe - wholesale table and chairs.
Na ihe ndị dị otú a, ị gaghị enwe ike ịhọrọ ma ọ bụ iji enyemaka nke mmemme ngwanrọ mara dị ka nchapu. Ọ bụ ụzọ na-eji usoro kọmputa enyere ndị ọrụ aka ịchịkọta ozi na usoro bara uru ma na-echekwa usoro ihe ọmụma ahụ.
Lxml na Arịrịọ
Nke a bụ ụlọ akwụkwọ ntanetị dị ukwuu nke na-enye aka n'ịtụle ma nyochaa XML na ngwa ngwa ngwa ngwa ma nyere aka n'ịchekwa oge. Ọ na-enyekwa aka n'ịnagide aha mkpado na usoro nyocha. Na usoro a, ị na-eji rịọ Lxml kama ịnweta urllib2 ebe ọ bụ ngwa ngwa, siri ike ma dị njikere..Ọ dị mfe ịwụnye ya site n'iji ụda wụnye Lxml na pipụnye arịrịọ.
Maka nchapu HTML na-eso usoro ndị a
Malite site na mbubata - ebe ị bubata HTML site na Lxml, wee bubata mbubata. Jiri arịrịọ wee chọpụta ibe weebụ nke nwere data ịchọrọ iwepụ, nyochaa ya site na ngwanrọ HTML ma chekwaa data ndị a na-etinye na ya.
Ị ga-eji ọdịnaya ọdịnaya karịa ederede ebe ọ bụ na HTML na-atụ anya ịnabata ndenye na octets. Osisi ahụ, ebe ị na-echekwa data gị nyochaa ugbu a nwere ihe odide HTML na usoro osisi. Ị nwere ike ịgafe usoro osisi dị iche iche, XPath na CSSelect.
XPath na-enyere gị aka weghachite ozi ma ọ bụ nweta ya na usoro ahaziri dị ka HTML ma ọ bụ XML. E nwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi nweta ihe ndị XPath. Ndị a gụnyere Firebug maka Firefox ma ọ bụ Inspector Chrome. Mgbe ị na-eji Chrome, nyocha ozi dị mfe ebe ọ bụ nanị na ịchọrọ 'nri' pịa mmemme nke chọrọ nyocha, họrọ 'Enwere ike,' mee ka amaokwu ahụ nyere, wee pịa nri ma họrọ dichapụ XPath. Usoro a ga - enyere gị aka ịmata ihe ndị dị na peeji gị ma site n'ebe ahụ, ọ dị mfe ịmepụta nyocha ajụjụ XPath na itinye Lxml XPath n'ụzọ ziri ezi.
Ịga site na usoro ndị a na-eme ka o doo anya na ị kpochapụrụ data niile ịchọrọ iwepụ site na webata weebụ site na iji Lxml na Arịrịọ. Ị ga-enweta ozi echekwara na listi ndepụta abụọ, ma ugbu a ọ dị njikere maka nhazi. Ị nwere ike nyochaa ya site na iji asụsụ mmemme dịka Eke Ọgba ma ọ bụ chekwaa ma kesaa ya. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọrọ idegharị ma ọ bụ dezie ụfọdụ akụkụ nke ozi tupu ịkekọrịta ya.